March 15, 2020 - Tameelay
March 15, 2020 Tameelay 0
သစ္စာမရှိတဲ့ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကိုခခယယဖတ်တွယ်ရလောက်အောင်ကျမရာဇဝင်မှာရှင်ကမခမ်းနားခဲ့ပါဘူး… ကိုယ်ကျင့်တရားမခိုင်မာတဲ့ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို လွမ်းဆွေးတသနေရလောက်အောင်ကျမရာဇဝင်မှာရှင်ကမကြီးမြတ်ခဲ့ပါဘူး ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကိုမျှော်လင့်တမ်းတနေရလောက်အောင် ကျမရာဇဝင်မှာရှင်က တန်ဖိုးမကြီးမားခဲ့ပါဘူး… ကျမရာဇဝင်မှာသစ္စာမရှိဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ခမ်းခမ်းနားနားမျှော်လင့်တမ်းတလွမ်းဆွေးနေရလောက်အောင်တန်လို့လား? ကျမရာဇဝင်မှာ တခန်းတနားရှိခဲ့တာဆိုလို့ ကျမကိုကျမလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ကျမကိုကျမတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေပဲရှိတယ်…. Nan Khin May Win တခမ္​းတနားလြမ္း​စရာလား..? သစၥာမ႐ွိတဲ့ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ကိုခခယယဖတ္တြယ္ရေလာက္ေအာင္က်မရာဇဝင္မွာ႐ွင္ကမခမ္းနားခဲ့ပါဘူး… ကိုယ္က်င့္တရားမခိုင္မာတဲ့ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ကို လြမ္းေဆြးတသေနရေလာက္ေအာင္က်မရာဇဝင္မွာ႐ွင္ကမႀကီးျမတ္ခဲ့ပါဘူး ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့​ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ကိုေမ်ွာ္လင့္တမ္းတေနရေလာက္ေအာင္ က်မရာဇဝင္မွာ႐ွင္က တန္ဖိုးမႀကီးမားခဲ့ပါဘူး… က်မရာဇဝင္မွာသစၥာမ႐ွိေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ကို ခမ္းခမ္းနားနားေမ်ွာ္လင့္တမ္းတလြမ္းေဆြးေနရေလာက္ေအာင္တန္လို႔လား? က်မရာဇဝင္မွာ […]
ကျွန်မ( me ) ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မူရှ်သလိုရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးချင်တဲ့စိတ်တွေရှိသလိုရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့မာနတရားတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဖောက်တဲ့လမ်းမကြမ်းဖို့ ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်းပြန်မလွမ်းဖို့ ကိုယ်ရည်ရွယ်တဲ့ပန်းတိုင်ကမရိုင်းဖို့အမြဲသတိရှိတယ်။ ကျွန်မ ပျော့ညံ့စိတ်တွေဝင်လာရင် စိတ်ဓာတ်တွေကိုရဲရဲရင့်ရင့်ထားဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ ချိုးနှိမ်ခံရတာတွေကြုံလာရင်နာကျည်းမူကိုသိမ်းဆည်းလို့အပြုံးလေးနဲ့နေပြဖို့ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး။ ဝမ်းနည်းစိတ်တွေဝင်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်ပေးဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ ရန်ပြုမယ့်သူတွေရှိလာခဲ့ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနိုးကြားမူှနဲ့စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ အထီးကျန်စိတ်တွေဝင်လာရင်နှလုံးသားကိုထွေးပွေ့ထားဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မူရှိသလိုရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးချင်တဲ့စိတ်တွေရှိသလိုရှိသငိ့ရှိထိုက်တဲ့မာနတရားတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ဖောက်တဲ့လမ်းမကြမ်းဖို့ ကိုယ်လျောက်တဲ့လမ်းပြန်မလွမ်းဖို့ကိုယ်ရည်ရွယ်တဲ့ပန်းတိုင်ကမရိုင်းဖို့အမြဲသတိရှိပါတယ်။ Nan Khin […]
ထက်မြတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မူရှိတယ်ဆိုတာသူမရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်လွင်နေတတ်တယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ချင့်ချိန်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းကောင်းတွေလည်းရှိကြတာကြောင့် အမှားနဲ့အမှန်,အနှစ်နဲ့အကာကိုခွဲခြားသိမြင်တယ်။ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့မာနတရားတွေရှိကြတယ်။တခြားသူကိုလွယ်လွယ်ဦးမညွတ်တတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မှားတာရှိရင်အမှားကိုဝန်ခံရဲတဲ့သတ္တိတွေတော့အပြည့်ရှိတယ်။ မိန်းမသားမို့တစ်ခါတလေ အားငယ်မိချင်အားငယ်မိပေမယ့် မာနတရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမာန်တင်းတတ်ကြတယ်။ ဘဝရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှင်သန်ရင်းသင်ယူလာခဲ့ရတော့ ခံစားနာကျင်လာရင်တောင်ပြုံးနေတတ်ခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်သူတစ်ပါးအရိပ်ကိုမမှီခိုဘူး… သူတစ်ပါးလွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်တာမကြိုက်ဘူး… သူတစ်ပါးသနားတာမခံတတ်ဘူး… တခြားသူကိုလွယ်လွယ်အောက်မကျို့တတ်ဘူး။ ထက်မြတ်တဲ့မိန်းမတွေတိုင်းအောင်မြင်ကြတာများပါတယ်။ သူမတို့ရဲ့အောင်မြင်မူနောက်ကွယ်မှာသူမကိုယ်တိုင်ပဲရှိနေတာကိုအမြဲဂုဏ်ယူနေတတ်ကြတယ်။ Nan Khin May Win ထက္ျမတ္တဲ့မိန္းမေတြရဲ႕စိတ္ ထက္ျမတ္တဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မူ႐ွိတယ္ဆိုတာသူမရဲ႕မ်က္ႏွာမွာေပၚလြင္ေနတတ္တယ္။ စဥ္းစားေတြးေခၚခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြလည္း႐ွိၾကတာေၾကာင့္ […]
ပု ုစ္ဆာဆန်တဲ့မိန်းမ အမြဲတမ်းခေါင်းမော့ထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာဘယ်အလောက်ထိနာကျင်ကြေကွဲခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူး။ တည်ငြိမ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာဘယ်လောက်အထိ လောကဓံကြမ်းကြမ်းတွေကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူး။ ပြုံးပြုံးလေးနေတတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်အထိနာကျင်ကြေကွဲခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတာကိုဟာသတစ်ခုလိုလှောင်ရယ်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်အထိချစ်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူး။ အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်အထိခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီမိန်းမဟာ,ဘဝတလျောက်လုံးခေါင်းမော့ပြီးလည်းနေတတ်သလို အမြဲတမ်းလည်းပြုံးနေတတ်တယ်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လည်းနေတတ်သလို ထီမထင်လည်းနေတတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမိန်းမရဲ့စိတ်ဟာအဖြေမရှိတဲ့ပုစ္ဆာတစ်ခုလိုပဟေဠိတွေနဲ့ခန့်မှန်းဖို့မလွယ်ကူသလိုသိနိုင်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်။ ဒါဟာသူမရဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ Nan Khin May Win […]
March 15, 2020 yoon waddy 0
ကိုယ့္အတြက္နည္းနည္းေလးမွ ငဲ့မၾကည့္တဲ့သူကို အျမဲတမ္းအရံႈးေပးျပီးခ်စ္ေနရတဲ့ခံစားခ်က္ကို အဲ့လိုခ်စ္ဖူးသူမွသိမွာပါ။ ကိုယ္ကပိုခ်စ္ရတာက အေျပာလြယ္သေလာက္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ရင္ဆိုင္ရတာခက္ခဲပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲခ်စ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုေခါင္းထဲမထည့္ထားတဲ့သူတစ္ေယာက္ကိုေတာ့ ေအာက္က်ေနာက္က်ခံျပီး မခ်စ္ေနသင့္ပါဘူး။ သူ႕ဘက္ကေနြးေထြးမႈကိုျပန္မရဘဲ ကို္ယ္ကပဲတြယ္ကပ္ျပီးခ်စ္ေနတဲ့အခါ ကိုယ့္ဘက္မွာဒီလိုထိခိုက္မႈေတြရွိလာနိုင္တာေၾကာင့္ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအတြက္ဂရုမစိုက္နိုင္ေတာ့ဘူး သူ႕အတြက္ပဲအျမဲဦးစားေပးျပီး စဉ္းစားေနတဲ့အခါ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြကို အျမဲအေနာက္မွာပို႕ထားျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအတြက္မစဉ္းစားနိုင္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဂရုမစိုက္နိုင္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အရံႈးသမားတစ္ေယာက္လိုခံစားရမယ္ ကိုယ္နဲ႕အနီးကပ္ဆံုးခ်စ္သူက လစ္လ်ူရႈထားတာကိုခံရတဲ့အခါ၊ […]
မိဘတိုင္းက သားသမီးေတြကို ေကာင္းေစခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႕ပဲ ဆံုးမပဲ့ျပင္ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ မိဘေတြရဲ႕ အျပုအမူေတြမွာ မွားယြင္းမႈေတြရွိေနရင္ ကေလးေတြရဲ႕နုနယ္တဲ့စိတ္ထဲမွာ အထင္အျမင္လြဲသြားျပီး ခံယူခ်က္ေလးေတြ လမ္းလြဲသြားတတ္ပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႕ ကိုယ့္သားသမီးရဲ႕အနာဂတ္ကို ကိုယ္တိုင္ဖ်က္ဆီးလိုက္သလိုမျဖစ္ေစဖို႕ ကေလးေတြကိုဆံုးမတဲ့အခါ ဒီအခ်က္ေလးေတြကို သတိထားဆင္ျခင္ဖို႕လိုပါတယ္။ ကေလး အျပစ္တစ္ခုခုလုပ္ရင္ လူၾကားထဲမွာမေအာ္ပါနဲ႕၊ မရိုက္ပါနဲ႕။ ကေလးအသက္အရြယ္နဲ႕မလိုက္တဲ့ အလုပ္ေတြခိုင္းတာမ်ိဳး၊ အျပစ္ဒဏ္ေတြေပးတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႕။ […]
အဝတ္အစားေတြေဟာင္းသြားရင္ မျဖစ္မေနအသစ္ဝယ္ဖို႕မလိုပါဘူး။ ေဟာင္းနြမး္သြားတဲ့အဝတ္အထည္ေတြ၊ အသံုးအေဆာင္ေတြကို ဒီနည္းေလးေတြနဲ႕ အသစ္ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပီး သံုးနိုင္ပါတယ္။ အျဖဴေရာင္အဝတ္ေတြ ဝါလာတဲ့အခါ မဲနယ္နဲ႕စိမ္ျပီးေလွ်ာ္ေပးလိုက္ရင္ အျပာေရာင္ျဖစ္သြားျပီး ေနာက္ထပ္ ၂ေခါက္ေလာက္ေလွ်ာ္ျပီးတဲ့အခါ နဂိုအျဖဴသန္႕သန္႕ကိုျပန္ရနိုင္ပါတယ္။ အက်ႌေတြမွာ အသီးေလးေတြထေနရင္ razor ေလးနဲ႕ အသီးေလးေတြကိုရိတ္ေပးလိုက္ရင္ အသစ္လိုျပန္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဦးထုပ္ေလးေတြ တြန္႕ေခါက္ျပီးပံုပ်က္ေနတယ္ဆိုရင္ ေရေႏြးတစ္အိုးတည္လိုက္ျပီး ေရေနြးေငြ႕ထြက္တဲ့ေနရာမွာ […]